#Xayndaabka Gumeystihii uu dhex dhigey Qabaa’ilada Soomaaliya Caalamku ma ictiraafsan yahay ? | Get Latest News From Horn of Africa
Home Opinion #Xayndaabka Gumeystihii uu dhex dhigey Qabaa’ilada Soomaaliya Caalamku ma ictiraafsan yahay ?
Horudhac: Marka hore waxaan Ilaahey ka rajanayaa in dhiig umada Somaliyeed ku daadan khilaaf ka dhesha xayndaab dhul boob ku salaysan oo kala sameysteen dalal Yurub ah oo iyagu dhexdooda dirir ka dhaxaysay.
Qadiyada kala sheegashada xuduudaha Somaliya gudaheeda ma tahay xuduudo rasmiya uu caalamku aqoonsan yahay? Somalidu ma yihiin qoomiyado kala duwan oo xuduudo ama xayndaabyo hore lahaan jiray ka dibna dawladihii isticmaarka ay mideeyen si khasab ah hal dalna laga dhigay sida Ethiopia & Eritrea ku waa oo dib u kala go’ay 1990s?
Hadaba si arinkaa loo xaqiijiyo halka salka ay ku hayso, waxan baaris cilmiyeed ku sameyey marxaladihii kala duwana ay Somalidu soo martay xiliyadii gumeystayaashii kala duwanaa ay Somali isu badaleen gacan ku haynteeda.
Sidoo kale baaris cilmiyeedkan wuxuu meesha ka saarayaa tarikhda ama tixraaca khaldan ay reebeen siyaasadaha Somalidu dhexdeeda ku kala xarig-jiidaneysay 27 sano u dambeyay. Islamarkaasna ay koox walba ‘his story’ ay ‘history’ uga dhigayso kuwa kale ka soo hor jeeda.
Hadaba daraasadan waxay baaris ku sameysay qarnigii 16aad ilaa 19aad tarikhda ay Yurub & Carab ka diiwaan galiyeen dadka Somalida ah.
Tarikhda Soomaaliya intii dalalka gumaysiga dhulkooda soo galeen ka dibna deegaamo u kala qaybsadeen qola walba inta ay awoodooda garsiisan tahay sheegtay in gaar u leeyahay.
Tarikha xilayada iyo marxaladaha kala duwan Somalidu soo martey waa mid sugan caalamkuna aqoonyahano kala duwan raad-raac ka reeben.
Mudada dambe madama ay Somalia dagaalo sokeeye iyo khilaafyo siyaasaded ku daba dheeraaden. Somalida dhexdeeda waxay isu meerisaa tarikho aan sal iyo raad ku lahayn mida caalamka Somaliya uga diiwan gashan.